भदौ २९, २०७७ BNCOM
सुशांत सिंह राजपूत केसमा ड्र’ग एंगल बहिरिएपछि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती कारागारमा पुगेकी छन्। साथै अहिलेसम्म कैयौँ भिडियो र बयानबाट यो कुरा पुष्टि हुन्छ कि सुशांत सिंह राजपूत पनि ड्र-ग्सको सेवन गर्थे। यो सवालको जवाफ पाउनको लागी एनसीबीले अभिनेताको अभिनेताको फार्महाउसमा छापा मा’रेको थियो।
सुशांत सिंह राजपूतको फार्म हाउसमा एनसीबीको छापाको क्रममा थुप्रै महत्वपूर्ण चीज मिलेको छ। जुनमा हुक्का तान्ने सामान कैयौँ औषधि पनि एनसीबीले फेला पारेको थियो। हुक्का म्याटेरियलमा ड्र-ग्स बड र गाँजा बनाईन्थ्यो। साथै सीसीटीभी फुटेजको डीभीआर पनि एनसीबीले खोसेको छ।
यसका साथै एक अर्को जानकारी बाहिरिएको छ। जसको अनुसार एक आयरल्यान्ड नजिक स्टार्सको ड्र-ग्स पार्टी हुन्थ्यो। साथै यस तीन अभिनेत्रीको नाम पनि रहेको छ। छिट्टै अरु अभिनेत्रीलाई पनि सोधपुछ गरिनेछ। एनसीबीले यस आयरल्यान्ड नजिक भएको ड्र-ग्स पार्टीसँग सम्बन्धित जानकारी जुटाएका छन्। बताईएको छ कि सुशांत अलग-अलग समयमा यस आयरल्यान्डमा गएका थिए।
प्रकाशित : सोमबार, भदौ २९, २०७७१३:०७
र्यापर हनी सिंह पनि भएका थिए यस्तो भ-यानक लतको शिकार!
हट रेड ड्रेसमा फेरि पनि इन्टरनेटमा छाईन पन्जाबकी कट्रिना, हेर्नुहोस केहि तस्विरहरु!
२ महिना अगाडि SG
भुलेर पनि नखानुहोस दुधसँग मिसाएर यस्ता चिजहरु, हुनेछ शरीरलाई निकै घातक!
२ महिना अगाडि BNCOM
ज्योतिष शास्त्र अनुसार यी ४ राशि हुने मानिसमा हुन्छ सधै लक्ष्मीको कृपा!
३ महिना अगाडि BNCOM